ဒီနှစ်မှာတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဒီဇင်ဘာလက ကျောင်းသူတစ်ဦး အုပ်စုဖွဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်ကြောင့် အမျိုးသမီးရေးကိစ္စရပ်တွေဟာ လူအများအပြား အချေအတင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ကိစ္စ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုတွေအပေါ် ပိုပြင်းထန်စွာ အရေးယူဖို့ ဥပဒေသစ်တွေလည်း ပြဋ္ဌာန်းပေးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှုဟာလည်း အလေးပေးခံခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသမီးရေး အကြမ်းဖက်မှု နှစ်ချုပ်ဆောင်းပါးကို နယူးဒေလီမှာရှိတဲ့ ဗွီအိုအေသတင်းထောက် Anjana Pasricha က သတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဒီသီတင်းပတ် အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာ ဒေါ်လှလှသန်းက တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ တံတားတစီးပေါ်ကနေ ဘတ်စ်ကား တစီး ချောက်ထဲ ထိုးကျသွားခဲ့တဲ့အတွက် အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၂၉ ယောက် သေဆုံးသွားတယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။
ဖက်ချဘွန်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ခွန်ဖမူဆောင် တံတားမှာ ညသန်းခေါင်ယံ အချိန်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ ကားဟာ မီတာ ၅၀ အမြင့်ရှိတဲ့ ခြောက်ထဲကို ထိုးကျသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒဏ်ရာရထားသူ ၅ ယောက်ကို ဆေးရုံကို အမြန်သယ်ဆောင် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအထဲက တယောက်ဟာ လမ်းမှာတင် သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ တာဝန် ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။
၂၀၁၂ ဇူလိုင်လ အတွင်းက လွတ်မြောက် လာသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့် အတူ တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – 88 Generation facebook မှ)
၁၉၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရ စစ်ကြောရေး စခန်းများနှင့် အကျဉ်းထောင်များ အတွင်း ကျဆုံးသွားခဲ့ရသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၅၄ ဦးအား ဂုဏ်ပြုသည့်အခမ်းအနားကို လာမည့်နှစ်ဆန်း ဇန်န၀ါရီလ ၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ပထမဆုံးကျင်းပ မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(AAPP) နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဟောင်းများ အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီ စားသောက်ဆိုင်တွင် နေ့လယ် ၁ နာရီမှ ၃ နာရီအထိ ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း AAPP တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုကြည်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“အကျဉ်းထောင်တွေနဲ့ စစ်ကြောရေး စခန်းတွေထဲမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာ အမေ့ခံလို ဖြစ်နေပါတယ်၊ ဒါကြောင့် သူတို့ကို ကျနော်တို့က မမေ့ဘူး၊ သူတို့ရဲ့ စွန့်လွှတ် စွန့်စားမှုတွေကို ကျနော်တို့က အသိအမှတ် ပြုတယ်၊ ဂုဏ်ပြုတယ် ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ပြချင်တယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဦးဘိုကြည်က “နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မိသားစုတွေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ခေါင်းမော့ပြီး နေနိုင်ဖို့ အတွက် စိတ်ဓာတ် ခွန်အားပေးတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဒီလို ဂုဏ်ပြုတာပါ။ ဒီလိုမျိုး ဒီလူတွေ ကျဆုံးသွားရတာရဲ့ အဓိက တရားခံကို ကျနော်တို့ကလည်း ဖော်ထုတ်ချင် တယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှု နောက်ပိုင်း စစ်ကြောရေးစခန်းနှင့် အကျဉ်းထောင်များ အတွင်း ကွယ်လွန်သူ စုစုပေါင်း ၁၆၂ ဦး ရှိပြီး အဆိုပါ ကျဆုံးသွားသူများ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အများစုကို အဓိက ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်သူများမှာ တချိန်က တန်ခိုးထွားခဲ့သည့် စစ်ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့များဖြစ်သည်။ တချို့သည် စစ်ကြောရေးစခန်းများတွင် နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းခံရပြီး သေဆုံးရသူများ ဖြစ်ကြောင်း ဦးဘိုကြည်က ရှင်းပြသည်။
“အထူးသဖြင့် ဒီလူတွေကို ဖမ်းတာ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေက ဖမ်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကြောရေးမှာ ကျဆုံးတဲ့သူတွေက လည်း ထောက်လှမ်းရေး နှိပ်စက်ရင်းနဲ့ သေဆုံး သွားရတာပါ။ အဲဒီအတွက် ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွှန့်မှာ တာဝန်ရှိတယ် ဆိုတာကိုလည်း ကျနော်တို့က မီးမောင်းထိုး ပြချင်တယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွှန့် အနေဖြင့် တချိန်က စစ်ထောက်လှမ်းရေး၏ နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းမှုများ ခံစားခဲ့ရသူများအား တောင်းပန်ရန် လို အပ်ပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း မိသားစုများ ဘ၀ပျက်ခဲ့ရသည့် ဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း တာဝန်ရှိကြောင်း ပြ သကဲ့သို့ ကျဆုံး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား ဂုဏ်ပြုပွဲကို ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“လတ်တလောမှာ အစိုးရ ကိုယ်တိုင်လည်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ရှိတယ်ဆိုတာ တရားဝင် အသိအမှတ် မပြုသေးပါဘူး”ဟု ဦးဘိုကြည်က ဆိုသည်။
ယင်းအတွက် လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရတို့ကပါ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အဖြစ် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုလာရေး ဆက်လက် တိုက်တွန်း သွားမည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာပြည်သူများက ၄င်းတို့အား နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသည့် ဂုဏ်ပြုပွဲတွင် ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေအရ အမေရိကန် အခြေစိုက် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးရေး အဖွဲ့တခု ဖြစ်သော NED ၏ လူ ၅၀ အတွက် ကူညီမှု၊ ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်များ၏ ထည့်ဝင် လှူဒါန်းငွေများဖြင့် ပထမအသုတ် အနေနှင့် ကျဆုံး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၅၄ ဦး၏ မိသားစုများကို မိသားစု တစုလျှင် ကျပ် ၁၀ သိန်းနှုန်းဖြင့် ပံ့ပိုးကာ ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ဂုဏ်ပြုခံရမည့် ကျဆုံး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၅၄ ဦးထဲမှ စစ်ထောက်လှမ်းရေးများ၏ နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းမှုဖြင့် ရေကြည်အိုင် ထောက်လှမ်းရေး စစ်ကြောရေး စခန်းတွင် ကျဆုံးသွားခဲ့သူ ဆိပ်ကမ်း အရာရှိတဦးဖြစ်သူ ဦးမောင်ကို၏ သမီးကြီး မဝေေ၀က မျှော်လင့် မထားသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ တန်ဖိုးထား ဂုဏ်ပြုသည့် အတွက် ၀မ်းသာမှု ဖြစ်သကဲ့သို့ သတိရမှုလည်း ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD)ပါတီဝင် ဦးမောင်ကိုသည် စစ်ထောက်လှမ်းရေး မဖမ်းဆီးခင်က ကျန်းမာစွာ ရှိခဲ့သော် လည်း စစ်ထောက်လှမ်းရေး၏ စစ်ကြောရေး စခန်း၌ ၁၆ ရက်အကြာ မတရားအနှိပ်စက်ခံရပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက် တွင် သေဆုံးသွားခဲ့သူ တဦး ဖြစ်သည်။
ယခင်က နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ၏ မိသားစုများသည် ဆွေးမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်း အပါအ၀င် ပတ်ဝန်းကျင်၏ ကျဉ်ဖယ်ခြင်း ခံထားရသည့် ခါးသီးမှုများစွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်း၊ တချို့လည်း စာနာမှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံရေး ပွင့်လင်းမှုများ ရှိလာခြင်းသည် အသက်၊ သွေး၊ ချွေး ပေးဆပ်သွားခဲ့ရသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ၏ အထောက်အပံ့သည် အဓိက ဖြစ် သည် ဟု ယုံကြည်ကြောင်း မဝေေ၀က ဆိုသည်။
“ဒီလို လူတွေက အသက် စတေးခံပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောဆိုခဲ့ကြလို့ ဒီလိုမျိုး နိုင်ငံရေး ပွင့်လင်းစ ပြုလာတဲ့ အခြေအနေ ရောက်လာ တယ်လို့ ကျမတို့ အနေနဲ့ အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ပါတယ်”ဟုလည်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
ကွယ်လွန်သွားကြသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများသည် ပွင့်လင်းစ ပြုလာသည့် နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းကို မြင်ခွင့် မရကြသော်လည်း ၄င်းတို့ အနေဖြင့် မျှော်လင့် ရည်မှန်းထားသော စစ်မှန်သည့် နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှု ပုံစံသို့ ရောက်ရှိရန် ကျန် ရစ်သူများက အားစိုက် ဖော်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ရှိသည်ဟုလည်း ယုံကြည်ကြောင်း မဝေေ၀က ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကျဆုံးသွားသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား ဂုဏ်ပြုခြင်းသည် နောင်လာမည့် အမှန်တရား ဖော်ထုတ်ရေး အတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ဦးဘိုကြည်က ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ယခုထိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားပေါင်း ၁ သောင်းကျော် ရှိနိုင်သည်ဟု နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအရေး လှုပ်ရှားသူများက ခန့်မှန်းထားကြသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် နိုင်ငံတ၀န်း ဒီမိုကရေစီ ဆန္ဒပြမှုများအတွင်း စစ်တပ်မှ သေနတ်နှင့် ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းသဖြင့် သေဆုံးသူ အနည်းဆုံး ၃ ထောင် ကျော် ရှိနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်သူများက ပြောဆိုကြသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြင်ဆင်ရန် အချက် ၁၅၀ ခန့်ရှိဟု အန်အယ်လ်ဒီပြော
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) က ပြင်ဖို့လုပ်ထားတဲ့ အချက်ပေါင်း ၁၅၀ လောက်ရှိတယ်လို့ အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းမြင့်က ပြောပါတယ်။
အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကို ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ရှိပြီး အဲ့ဒီ အစည်းအဝေးမှာ လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပုံ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီကို တင်မယ့် အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အကြံပြုစာတမ်းကို အတည်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ထဲ့သွင်းရေးဆွဲထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ နည်းမကျတဲ့ အချက်တွေ၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေတဲ့အချက်တွေ၊ ပြည်ထောင်စုမူနဲ့ မကိုက်တာနဲ့ တန်းတူညီမျှမှု မရှိတဲ့အချက်တွေ အားလုံးလောက်နီးနီး ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့လည်း စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
City Viewမြန်မာပြည်မှာ အိမ်ဈေးနှုန်းတွေ မြင့်တက်ခဲ့သလို အိုးအိမ်ငှားခတွေကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်၊ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ ဟနွိုင်းနဲ့ တခါတရံမှာ စင်ကာပူထက် မြင့်နေတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးပြဿနာ ပူးပေါင်းဖြေရှင်းမည်ဟု ရှမ်းလူငယ်ညီလာခံပြော
မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်အသီးသီးက ရှမ်းလူငယ်တွေ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာ၊ စာပေယဉ်ကျေးမှုရေးရာ ကိစ္စတွေကို ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းပြီး ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်း သွားကြမယ်လို့ ရှမ်းလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောပါတယ်။
မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြေ့သာစည်မြို့နယ် သာသနာ့ဝေပုလ္လ ကျောင်းတိုက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အသီးသီးက ရှမ်းလူငယ် ကိုယ်စားလှယ် ၂၀၀ ကျော် တွေ့ဆုံပြီး ရှမ်းစာပေယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ရေး၊ လူငယ့်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးနဲ့ လူငယ်တွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေ အတူတကွ ပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့ ဆွေးနွေးနေကြတာပါ။
ရှမ်းလူမျိုးတွေဟာ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်အသီးသီးမှာ ပျံ့နှံ့နေထိုင်ကြပြီး စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်သွားမယ့်အနေအထား ရှိတဲ့အတွက် လူငယ်တွေအနေနဲ့ တဖက်တလမ်းကနေ ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ရှမ်းလူငယ်များ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ပြောခွင့်ရ စိုင်းဆိုင်မိုင်းက ပြောပါတယ်။
“ပြည်နယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ လူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ ထဲမှာ ရှိတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ စွမ်းအင်တွေ တဖြည်းဖြည်း နိမ့်ကျလာတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး ကဏ္ဍမှာ ဘယ်လို ပူးပေါင်း ပါဝင်ကြမလဲဆိုတာ ကျနော်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ မူးယစ်ဆေး ပြဿနာပေါ့နော်။ မူးယစ်ဆေးဝါး ဆိုတာကလည်း ရောင်းဝယ်မှုတွေရှိမယ်၊ စိုက်ပျိုးမှုတွေ ရှိမယ်၊ သုံးစွဲမှုတွေ ရှိမယ်၊ ကျနော်တို့ လူငယ်တွေ အများဆုံး ကြုံတွေ့နေတာက မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု ပြဿနာပေါ့နော်။ ဒါတွေကိုလည်း ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ။ နောက်တခုက မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု လျော့ကျအောင် ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။”
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှုတွေကြောင့် ရှမ်းလူငယ်နဲ့ လူလတ်ပိုင်း အတော်များများဟာ အိမ်နီးချင်းတဘက်နိုင်ငံတွေမှာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအဖြစ် သွားရောက် လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ကိစ္စလည်း လူငယ်တွေ အလေးထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီတွေ့ဆုံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ရှမ်းလူငယ်တွေ အများဆုံး၊ အဖွဲ့အစည်း အစုံလင်ဆုံး ပါဝင်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကြီးဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲ ပထမရက်မှာတော့ မန္တလေး ရှမ်းစာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအသင်း၊ တက္ကသိုလ်များ ရှမ်းစာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ကျားဖြူပါတီ လွှတ်တော်အမတ်တွေလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်ကနေ ၂၉ ရက်နေ့အထိ ၃ ရက်တာ ကျင်းပသွားမယ့် ဒီနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲကို ရှမ်းလူငယ်အဖွဲ့တွေ ပူးပေါင်းစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း အစရှိတဲ့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ စာပေယဉ်ကျေးမှု၊ လူငယ်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့၊ လူငယ်ပညာရှင် စသဖြင့် အဖွဲ့ပေါင်း ၃၀ ကျော်က ကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အာဆီယံ မသန်စွမ်းသူများ အားကစားပြိုင်ပွဲ ပါရာဆီးဂိမ်းပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု မြန်မာအားကစားသမာတွေဟာ အစိုးရရဲ့ ကူညီ အားပေးထောက်ပံ့ပေးမှုတွေ ပိုမိုရရှိဖို့ လိုလားနေကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမယ့် ၇ ကြိမ်မြောက် ပါရာဂိမ်းပြိုင်ပွဲကို လာမယ့် ဇန်န၀ါရီလလယ်လောက်မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သီတင်း ၂ ပတ်လောက်ပဲ လိုတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခုချိန်မှာ အားကစားသမားတွေဟာ သူတို့အတွက် အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုမှုနဲ့ ထောက်ပံ့မှုတွေ အားနည်းနေလို့ စိတ်ဓာတ်ကျနေကြပြီး နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ကစားသမားချင်းအတူတူ တခြား သန်စွမ်းတဲ့ကစားသမားတွေလို အခွင့်အရေး တန်းတူ ရလိုကြတယ်လို့ မသန်စွမ်း အားကစားသမားတွေက ပြောပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲအတွက် နိုင်ငံခြားဖြစ် လက်တွန်းလှည်းသစ်တွေ ၀ယ်ယူထားပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ ကစားသမားတွေထံ မရောက်သေးကြောင်းနဲ့ တွန်းလှည်းအသစ်နဲ့ အသားကျဖို့ ၁ လကျော်လောက် လေ့ကျင့်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ သုံးဘီး လက်တွန်းလှည်း ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် မသန်စွမ်း ကစားသမား ဦးတင်သန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ နေပြည်တော်သွားတုန်းကဆိုရင် နယ်ကနေ ရန်ကုန်အထိ ကိုယ်စရိတ်နဲ့ ကိုယ်လာရတာ။ ဟိုရောက်တော့လည်း အားကစားသမားတွေက ကြိုးစားကြရတယ်။ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေး ရကြတယ်။ ရွှေရတဲ့သူကို နိုင်ငံတော်က ၁ သောင်းပေးတယ်။ ငွေရရင် ၇၅၀၀ ကျပ်ရတယ်။ ဒါတွေက ရယ်စရာတွေလို ဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ့်ရွာပြန်ရင် မင်းတို့ဘာတွေရလာလဲ တံဆိပ်တွေ ရလာတယ်၊ ငွေ ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် မေးရင် ၁ သောင်းပဲရတယ်ပြောရင် မယုံကြဘူး။ ဒါက နိုင်ငံတော်ရဲ့ ထောက်ပံ့မှုပိုင်း အားနည်းတာပေါ့နော်။ အခုနိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့မှုပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ အားကစားသမားတွေ တလကို ၉ သောင်းပေးတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့က ထမင်းစားစရိတ်ဆိုပြီး ၇ သောင်းခွဲ ပြန်ဖြတ်တယ်။ ၁ သောင်းခွဲပဲ ကျန်တာပေါ့။ အဲဒီ ၁ သောင်းခွဲက ကိုယ့်နယ်မြေကို ဖုန်းပြန်ဆက်ရတဲ့ ဖုန်းကတ်ဖိုးတောင် မရှိဘူး။”
၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီလောက်တည်းက စတင်လေ့ကျင့်နေတဲ့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် မသန်စွမ်း ကစားသမားတွေကို တနေ့ စားစရိတ် ကျပ်ငွေ ၂၅၀၀ ပေးခဲ့ပြီး ၆ လပိုင်းမှာ ကျပ် ၃၀၀၀ ထိ တိုးပေးကာ ပံ့ပိုးမှုတွေ ရရှိပေမယ့် ကစားသမားအများစုဟာ ငွေကြေးမပြည့်စုံ သူတွေ ဖြစ်တာကြောင့် မလောက်ငမှုတွေလည်း ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မသန်စွမ်း ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမား ကိုဝဏ္ဏကျော်စွာကတော့ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ကစားသမားအဖြစ် နေပြည်တော်က အားကစားရွာမှာ လေ့ကျင့်ဖို့ ရွေးချယ်ပြီးမှ ပြန်လွှတ်ခံရတဲ့ ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူက မျှော်လင့်ချက်တွေ ရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“တကယ့်တကယ် နေပြည်တော် သွားရတော့မယ့်အချိန်ကြမှ အယောက် ၆၀ လောက် ထပ်လျော့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ တော်တော်ခံစားရတယ်။ ကြေလည်း ကြေကွဲတယ်၊ ၀မ်းလည်း ၀မ်းနည်းတယ်။ ၁ လပိုင်းကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေ အတူတူ ထမင်းကျွေးထားတာလေးကိုပဲ မက်မက်မောမောနဲ့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အချိန်တွေက နောက်ဆုံး နေပြည်တော် သွားခါနီးမှ မင်းကတော့ အိမ်ပြန်…. မင်းကတော့ အိမ်ပြန်ဆိုတော့ အားကစားသမားတွေထဲမှာ ပြဿနာတွေ အများကြီးပဲ စိတ်မကောင်းစရာတွေပေါ့။ တချို့ဆို ငိုကြတယ်၊ ကြေကွဲကြတယ်ပေါ့။ ဘာအခွင့်အရေးတခုမှ မရဘဲနဲ့ ကြိုးစားနေတဲ့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ချက်တွေ အားကစားရွာထဲမှာ ပျက်စီးခဲ့တယ်။ တချို့ဆိုရင် မသန်စွမ်းအားကစားဆိုရင် တော်ပါတော့ကွာဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်ကျသွားတာတွေ ရှိတယ်။ ”
ဒါ့ပြင် အားကစားကွင်းတွေဟာလည်း စတင်တည်ဆောက်ကတည်းက မသန်စွမ်း ကစားသမားတွေအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစား တည်ဆောက်ထားတာမျိုး မဟုတ်လို့ ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် အားကစားသမားတွေအတွက် အခက်အခဲတွေလည်း ရှိနေတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့မှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေး ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်ကိုမြင့်က ပြောပါတယ်။
“မသန်စွမ်းအားကစားပွဲတော် ကျင်းပမယ့် အဆောက်အဦတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သွားရောက်လေ့လာပြီးတော့မှ ပြန်လည် တင်ပြခွင့်တွေ ရခဲ့တယ်။ ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ မျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေအတွက်ကို အလွယ်တကူ သွားလာလို့ရတဲ့ မျက်မမြင်လမ်းလျှောက်တဲ့ Braille block ဆိုတာ မရှိဘူး။ တဆက်တည်းမှာပဲ ဘီးတပ် ကုလားထိုင်သုံးတဲ့သူတွေ သွားဖို့ အိမ်သာတွေက အ၀င်အ၀တွေက ကျဉ်းနေတယ်၊ အထဲမှာလည်း အထစ်တွေနဲ့ တွေ့နေတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးဖို့ဆိုပြီး အကြံပြုခဲ့တယ်။ ပြန်လည် ပြုပြင်မပြင်တော့ မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ ကျနော်အကြံပြုခဲ့တာပါ။ ”
အရှေ့တောင်အာရှ မသန်စွမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲကို ဇန်န၀ါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ကနေ ၂၀ ရက်ထိ နေပြည်တော် ၀ဏ္ဏသိဒ္ဓိ အားကစားကွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် ပထမဆုံးအကြိမ်လက်ခံ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး အာဆီယံ ၁၁ နိုင်ငံက မသန်စွမ်းအားကစားသမား ၁၄၀၀ ကျော် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဒုဝန်ကြီး ဦးဇော်ဝင်းကတော့ မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲ ကျင်းပခြင်းဖြင့် မသန်စွမ်းသူတွေရဲ့ အသက်ရှင် ရပ်တည်ရာမှာ အရေးပါတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှု၊ ခန္ဒာကိုယ် ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုနဲ့ ခွန်အားပြည့်ဖြိုးမှုတွေ ဖြည့်စွမ်းနိုင်မယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
လာမယ့် ဇန်န၀ါရီလဆန်း ပထမပတ်မှာ ချင်းပြည်နယ်မှာ ကျင်းပမယ့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လူထုဆန္ဒကောက်ခံပွဲကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် တက်ရောက်ဟောပြောမယ်လို့ မိသားစု ဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းက ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ခြေမခွဲစိတ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာ သက်သာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် လမ်းပြန်လျှောက်နိုင်ပြီး ဟောပြောဖို့အတွက်လည်း အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းက ပြောပါတယ်။
"သွားဖြစ်ပါတယ်၊ တချို့အင်တာနက်ထဲမှာ မသွားဖြစ်ဘူး၊ ဘာတို့ပြောလို့လေ၊ ကျိန်းသေသွားမှာပါ၊ မနေ့က ချုပ်ရိုးဖြေတယ်၊ အားလုံးအခြေအနေကောင်းတယ်၊ လမ်းလျှောက်လို့ရတယ်၊ ခြေထောက်ထောက်လို့ရတယ်၊ အဲဒါကြောင့် သူစကားပြောလို့ရတယ်၊ အဲဒါကြောင့်မို့ မသွားဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး၊ ခြေထောက်ခွဲထားတာကလွဲရင် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကောင်းပါတယ်၊ သွေးရော ဒီဓာတ်မှန်တွေရော အဆုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှလုံးပိုင်း ဆိုင်ရာ အားလုံးစစ်ထားတာ အားလုံးကောင်းပါတယ်၊ ပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့နော်၊ ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ အတွက် သွားမှာပါ"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်မလား အသစ်ပြန်ရေးမလားဆိုတဲ့ လူထုဆန္ဒကောက်ခံပွဲတွေကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကော့မှူးမြို့နယ်နဲ့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သာယာဝတီမြို့တွေမှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ခြေမခွဲစိတ်အပြီး အရင်ကစီစဉ်ထားတဲ့ ဒီဇင်ဘာလနှောင်းပိုင်း နယ်ခရီးစဉ်တွေကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCCT နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုဥက္ကဌ ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၁၈ ယောက်ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့ မနေ့ညနေပိုင်း က ထိုင်းနုိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ကို လေကြောင်းခရီး နဲ့ ရောက်ရှိလာပါတယ်။
ချင်းမုိုင်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ ဒီခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန MPC က တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် ဦးညိုအုန်းမြင့်က RFA ကို အခုလို ပြောဆုိုပါတယ်။
"အဓိကတော့ ကျနော်တို့ တစ်ပြည်လုံးအတုိုင်းအတာနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကဖွဲ့ထားတဲ့ အလုပ်အဖွဲ့နဲ့ ကျနော်တို့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်က ပထမတစ်ခေါက်ကလည်း ရန်ကုန်မှာ လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျ၊ ရန်ကုန်မှာလုပ်ပြီးတော့ ဒီဘက်ကို ၀န်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ကို လာဖို့အတွက် သူတို့ဖိတ်ထားပါတယ်၊ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် ဒီလိုအပြန်အလှန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်လို့ရအောင် ကျနော်တို့လာတာပါခင်ဗျ၊ ကျနော်တို့ ညှိနှိုင်းရေးက အမြဲတမ်းဦးဆောင်တဲ့ဟာကတော့ ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းပါ၊ နောက် လ၀ကဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ၊ နောက်တစ်ခါ နယ်စပ်ရေးရာ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဗုိုလ်ချူပ် မောင်မောင်အုန်း၊ နောက် ရှေ့နေချူပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး တို့လည်းပါပါတယ်၊ ကျန်တာကတော့ ကျနော်တို့ MPC အလုပ်အဖွဲ့က လူတွေချည်းပါပဲခင်ဗျ"
ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဟာ အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီဟာ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူ နယ်စပ်ဒေသအခြေစိုက် လူထုအခြေပြု လူမှုအဖွဲ့အစည်းကလူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမယ့် ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြောဆိုသွားဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ ဦးညိုအုန်းမြင့်က ပြောဆိုပါတယ်။
"အဓိကတော့ ကျနော်တို့ NCCT နဲ့ ထပ်ပြီးတော့ ဒီဘက်ကအစိုးရနဲ့ ကျန်တဲ့ကျနော်တို့ ကွန်ဆမ်းပါတီတွေပေါ့နော်၊ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ သဘောထားကိုလည်း ကျနော်တို့ဒီဘက်မှာ ပြန်ပေးတာပါ။ ကျနော်တို့ အခုလောလောဆယ် သတ်မှတ်ထားတာကတော့ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ကျနော်တို့ အလွတ်သဘောလုပ်ပါမယ်၊ ၂၉ ရက်နေ့ ပြီးတဲ့အခါကျရင် နောက်လ ၁၀ ရက်နေ့လောက်မှာ ဘားအံအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာ ကြိုပြီးတော့ အပြင်မှာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြမယ်၊ လောလောဆယ်မှာ ဒီမြို့ရောက်တဲ့အခါကျရင် ကျနော်တို့ အမြဲတမ်းတွေ့လေ့ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကတော့ အလွတ်သဘောတွေကတော့ အမြဲတမ်းဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ"
ကချင်ပြည်နယ် KIO ဌာနချူပ် လိုင်ဇာမြို့မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိုင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ၁၃ ယောက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NCCT အဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ တစ်ပြည်လုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချူပ်မူကြမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့က ထိုင်းနုိုင်ငံ ချင်းမုိုင်မြို့မှာ ၃ ရက်ကြာ ထပ်မံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး နောက်ဆုံးသဘောတူထားတဲ့အချက်တွေကို ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်း ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကို ပြန်ပြီးတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဒီအကြောင်း RFA သတင်းထောက် ဦးအောင်မိုးမြင့် သတင်းပေးပို့ထားတာကိုလည်း တဆက်တည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။
(နိရဉ္စရာ- ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂)
ရခိုင်သမိုင်းသုတေသီ ရှေးဟောင်း သုတေသန ဌာန လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်း ဆရာ ဦးကျော်ထွန်းအောင်သည် ကျန်းမာရေး အခြေအနေဆိုးရွားနေသဖြင့် ရန်ကုန် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးတွင် သတိမရဘဲ ဖြစ်နေသည်ဟု သိရသည်။
ရခိုင်-မြန်မာ ပဏ္ဍတိတ် ဆရာကြီး ဦးသာထွန်း၏ သားကြီး ဖြစ်သူ ဆရာဦးကျော်ထွန်းအောင်အား နှလုံးရောဂါကြောင့် ဆေးရုံကို တင်ခဲ့ရပြီး ယခုအခါ ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးတွင် သတိမရ ဖြစ်နေကြောင်း ဆရာ၏ ဇနီးဖြစ်သူက ပြောသည်။
ဆရာဦးကျော်ထွန်းအောင်တွင် နှလုံးရောဂါ အခံရှိပြီး ရုတ်တရက် နှလုံးထိခိုက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ဥဏှောက်ကိုပါ ထိခိုက်သွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဆရာအား ဆေးရုံတင်ထားရသည်မှာ (၇) ရက်ခန့်ရှိနေပြီး ဖြစ်ပြီး အခြေအနေမှာ အထူးဆိုးရွားနေသဖြင့် မိသားစုများက အထူး စိုးရိမ် ပူပန်နေကြသည်ဟု သိရသည်။
၁၅၀၀ ကျပ်တန်မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းမ်ကတ်များ ဧပြီ ၂၄ ရက်မှစတင်၍ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် မဲဖောက်ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲ မရိုးမသားပြုလုပ်မှုများရှိပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ၀န်ကြီးဦးအောင်ခင်က ပြောကြားသည်။
“ပြည်သူတွေအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာ ရောင်းဝယ်ရေးကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့ ပြည်သူတွေရှေ့မှာ မဲစနစ်နဲ့ ရောင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ခင်က ပြောကြားသည်။
“ဧပြီ ၂၁ ရက်နေ့မှာ မဲနှိုက်ပြီးပြီ။ ရပ်ကွက်ထဲက ပြည်သူတွေရှေ့မှာပဲ မဲနှိုက်ကြတာပါ။ လျှောက်ထားတဲ့စောင်ရေကတော့ ၁၅၀၀ ကျော်လောက်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ ခွဲတမ်းကတော့ ၂၄၀ လောက်ရတယ်” ဟု မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် အပိုင်း(၁) မှ (၈)အထိ အုပ်ချုပ်သော အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစိန်ဝင်းက ပြောသည်။
ယခုရောင်းချပေးသည့် ကျပ် ၁၅၀၀ တန်ဆင်းမ်ကတ် CDMA 800 Mhz ၀ယ်ယူရာတွင် လျှောက်လွှာတင်ထားသူများသည် မဲမပေါက်ခဲ့ပါက နောက်လများတွင်ထပ်မံချထားပေးမည့် ဆင်းမ်ကတ်များအတွက် လျှောက်လွှာတင်ရန်မလိုကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
“အခုမဲနှိုက်လို့မပေါက်တဲ့ သူတွေက နောက်ထပ်ချပေးမယ့် ဆင်းမ်ကတ်အတွက် လျှောက်လွှာတင်စရာ မလိုတော့ဘူး။ လျှောက်လွှာပျက်စီးတာတို့၊ ပျောက်သွားတာတို့ကတော့ ထပ်တင်ရမယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
၁၅၀၀ ကျပ်တန် ဆင်းမ်ကတ်များကို ပထမအသုတ်တွင် ကတ်ပေါင်း ၃၅၀၀၀၀ ခွဲဝေရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် CDMA 800 MHz ဆင်းမ်ကတ်များကိုသာ ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပြီး CDMA လိုင်းမမိသည့် နေရာများတွင်သာ WCDMA ဖုန်းဆင်းမ်ကတ်များကို ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
“အခုလက်ရှိကတော့ CDMA 800 MHz ကိုပဲ ဦးစားပေးရောင်းချသွားမယ်။ နောင်တစ်လ၊ နှစ်လ လောက်နေရင်တော့ WCDMA လိုချင်တဲ့သူတွေ ၀ယ်နိုင်အောင် ရောင်းချပေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်” ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးဌေးဝင်းက ပြောသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းဝယ်လိုသူ အများစုမှာ CDMA 800 MHz ဖုန်းထက် WCDMA နှင့် ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းလိုင်းကိုသာ ၀ယ်ယူလိုသူများကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
လမ်းမတော်မြို့နယ်နေ WCDMA ဖုန်းလိုချင်သူတစ်ဦးက “အခုချထားပေးမယ့် CDMA 800 MHz ကိုတော့ မလိုချင်ဘူး။ WCDMA ပဲ လိုချင်တာ။ CDMA 800 MHz က ဟန်းဆက်လည်း မပေါဘူး။ ရန်ကုန်တို့ မန္တလေးတို့လို မြို့ကြီးတွေမှာ လိုင်းကောင်းပေမယ့် နယ်ရောက်သွားရင်တော့ အဆင်မပြေတော့ဘူး” ဟု ဆို သည်။ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် CDMA မိုဘိုင်းတာဝါတိုင် အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး CDMA ဆင်းမ်ကတ် ၃၅၀၀၀၀ ကို ခွဲဝေရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးမိုဘိုင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးဌေးဝင်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံတကာဖိအားလျော့ရန် နိုင်ကျဉ်းများကို အသုံးပြုနေဆဲဟု ဝေဖန်
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးမှုကို နိုင်ငံတကာ၏ဖိအား လျှော့ချရေးအတွက် လက်နက်တစ်ခုအဖြစ် မြန်မာအစိုးရက ဆက်လက်သုံးစွဲနေဆဲဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများနှင့် နိုင်ငံ ရေးအကျဉ်းသားများအရေး ဆောင်ရွက်သူများက ဝေဖန်လိုက်သည်။
အကျဉ်းထောင်များအတွင်းမှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အပါအ၀င်အကျဉ်းသား ၉၃ ဦးအား သမ္မတ၏အမိန့်ဖြင့် ဧပြီလ ၂၃ ရက်ညနေတွင် အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၎င်းက ကြိုဆိုလိုက်သော်လည်း အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအရေး လှုပ်ရှားသူများ ဆွေးနွေးနေသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်သည့်ပုံစံမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို ရုပ်သိမ်းချိန်နှင့် ချိန်သားကိုက် လွှတ်ပေးသည့်ပုံစံဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်သူများကဆိုသည်။
““အဓိက က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ရုပ်လို့ လွှတ်တယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။ မနေ့က အီးယူက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ရုပ်လိုက်တာပေါ့။ အီးယူကို သူတို့ဘက်က တစ်ခုခုပြန်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ သဘော မျိုး သက်ရောက်နေတယ်”” ဟု နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) မှ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုကြည်က ပြောသည်။
ဧပြီ ၂၃ ရက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအရေး ဆောင်ရွက်သူများက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟု သတ်မှတ်ထားသူ ၁၉ ဦးခန့်နှင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များမှ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄၀ ခန့်လည်း လွတ်မြောက်သည့်အထဲ တွင် ပါဝင်သည်။ သို့သော်လည်း လွတ်မြောက်ရန် တောင်းဆိုထားသူ အများအပြားကို ချန်လှပ်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်သူများက ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်းကလည်း အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် ကိုလင်္ကျာထွန်းအပါအ၀င် ထင်ရှားသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးခဲ့သည်။
အစိုးရဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အရေးဆောင်ရွက်သူများ လက်ကျန် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ စိစစ်ရေးကော်မတီကို ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက ဖွဲ့စည်းကာ ဆွေးနွေးနေသောကြောင့် အကျဉ်းထောင်များအတွင်း ရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနှင့် ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူများမှာ လွတ်မြောက်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာ ထားနေကြကြောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အရေးဆောင်ရွက်နေသူများက ပြောသည်။
အဆိုပါ ကော်မတီမှ လွတ်မြောက်ရန် ကျန်ရှိသေးသည့် အကျဉ်းသား ၃၆၀ ကျော်၏ အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းမှု များပြုလုပ်နေသော်လည်း ယခုတစ်ကြိမ် လွှတ်ပေးမှုမှာ ကော်မတီအတွင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဖြစ်မှု သတ်မှတ်ထားသည့် စံနှုန်းနှင့်မဟုတ်ဘဲ မည်သည့် စံနှုန်းဖြင့်လွှတ်ပေးကြောင်းပင် မသိရကြောင်း အဆိုပါကော်မတီအဖွဲ့ ၀င်များက ပြောသည်။
““မူတစ်ခုနဲ့ စနစ်တကျ လွှတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ အရင်ပုံစံအတိုင်းပဲ ဘာမှမပြောင်းလဲဘူး။ သူတို့ လွှတ်ချင်တဲ့သူတွေ လွှတ်တယ်”” ဟု ယင်းကော်မတီဝင် ဦးဘိုကြည်က ပြောသည်။
အဆိုပါကော်မတီကို ရည်ညွှန်းပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတက မိန့်ခွန်းပြောရာတွင်လည်း နိုင်ငံရေးဟူသည့်အသုံးအနှုန်းကို ထည့်သွင်းခြင်းမရှိဘဲ လက်ကျန်အကျဉ်းသားများ စိစစ်ရေးကော်မတီဟုသာ မကြာခဏသုံးစွဲခြင်းအပေါ် စိတ်ပျက်မိကြောင်း ယင်းကော်မတီမှ အဖွဲ့ဝင်အချို့က ပြောသည်။
ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းဆိုသည်မှာ ပြောကြားသူက တိုက်ရိုက်အသံသွင်းပြောကြားသော ပြောစကား ဖြစ်သည့်အတွက် အချို့အသုံးအနှုန်းများမှာ စာစကားနှင့် ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါကြောင်း၊ အရေးကြီးသည်မှာ ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းအနှစ်သာရဖြစ်ကြောင်း၊ မိန့်ခွန်းကို သုံးသပ်မည်ဆိုလျှင် ပြောစကားနှင့် စာစကားကွာခြားမှုတွေကို အပြစ်ရှာထောက်ပြသည်ထက် မိန့်ခွန်းတစ်ခုလုံးက မည်သည့်သတင်းစကားကို ပေးသည်ဆိုသည်ကို သုံးသပ်ခြင်းက ပိုပြီး လက်တွေ့ကျ၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိမည်ဟု ထင်ကြောင်း သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မတ်လအတွင်းက 7Day သို့ အီးမေးလ်ဖြင့် ဖြေကြားရာတွင် ထည်သွင်းဖြေကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့် သဘောတူညီမှုအရ လာရောက်လည်ပတ်သူများအနေဖြင့် ၁၄ ရက်ကြာ နေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံကြား ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပိုမိုတိုးတက်လာကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍများကိုပါ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်ဟု ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ကပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ယခုလအတွင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်သော ခရီးစဉ်များအတွင်း နှစ်နိုင်ငံအစိုးရများ ခရီးသွားဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ကို သဘောတူညီမှု ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်သူ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ၁၂ ရာစုခေတ် ရှေးဟောင်းစေတီပုထိုးများ၊ ရှေးဟောင်းအနုပညာလက်ရာများ နှင့် ရှေးဘုရင်များ၏ မြို့ဟောင်းများကို လေ့လာမှုပြုလုပ်နိုင်သည်ဟု ဖိလစ်ပိုင်သတင်းစာများက ညွှန်းဆိုထားသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည် နှစ်သန်းနီးပါး ၀င်ရောက်မည်ဟု ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားထားပြီး ၂၀၁၄ တွင် ခရီးသွားဧည့်သည် သုံးသန်းအထိ တိုးလာမည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။
နယ်ဈေးတစ်ခုအတွင်းမှ ခရမ်းချဉ်သီးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို တွေ့ရစဉ် ဓာတ်ပုံ - ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ)
ထိုကဲ့သို့ ၀ယ်ယူတင်သွင်းရန်အတွက် အီတလီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးက လယ်/ဆည်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းလာခြင်းဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့လိုအပ်သော ပမာဏနှင့် အရည်အသွေးရရှိရန်အတွက် မျိုးစေ့ပေးပြီး စိုက်ပျိုးစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်က ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
““နေ့စဉ် ဧက ၃၆၀ က ထွက်တဲ့ဟာကို နေ့စဉ်အနှစ်ထုတ်၊ ကုန်ချောပြုလုပ်ပြီး ၀ယ်ယူတင်သွင်းဖို့ရှိပါတယ်””ဟု ၀န်ကြီးဌာနတွင်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး၌ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။တစ်နိုင်ငံလုံးက လိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စံပြအဖြစ် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော နေပြည်တော်ထွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံများကို ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်း၊ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ရုရှား၊ ယူကရိန်းနိုင်ငံတို့ကလည်း ၀ယ်ယူတင်သွင်းကြမည်ဟုဆိုသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသည် တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး တန် ၅၀၀၀ ၀ယ်ယူရန်ရှိပြီး ၀ယ်ယူလိုသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံအမည်များကိုလည်း ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်သည်။
““ဂျပန်အကြိုက်ဆုံးကတော့ ပိန်းဥပါ””ဟု စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားသည်။
ကေအိုင်အို၏မူးယစ်ဆေးဝါးလုံးဝတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီ ဒုတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇောင်းဗုခ်ထန်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
အတွဲ (၁၂)၊ အမှတ်(၁၈)
ကချင်ပြည်နယ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ကေအိုင်အိုနှင့် ကချင်လူငယ်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို မေ ၂၄၊ ၂၅ ရက်တို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲသို့ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် မူးယစ်ဆေး ၀ါးပပျောက်ရေးလုပ်ကိုင်နေသော အဖွဲ့အစည်း ၃၀ မှ လူငယ်ခေါင်းဆောင်များအပါအ၀င် ၁၅၀ ဦးခန့် တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲပြီးနောက် ကေအိုင်အိုမူးယစ်ဆေးဝါး လုံးဝတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မတီဒုတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးချုပ် ဇောင်းဗုခ်ထန်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်ကို စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် ကောက်နုတ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
မေး- ပထမဦးဆုံး မူးယစ်ဆေးဝါး လုံးဝပပျောက်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတယ်လို့ သိရတယ်။ ဘာကြောင့် ကျင်းပတာပါလဲ။
ဖြေ- ကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးတွေ မူးယစ်ဆေးဝါးကို မသုံးစွဲဘဲ တိုက်ဖျက်ကြရအောင်လို့ အစည်းအဝေးမှာလည်း ပြောပြီးပြီ။ ၁၉၆၄ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ စတင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကေအိုင်အိုတွေအနေနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးတွေ လုပ်နေတာ ယနေ့အချိန်အထိပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ အကြိမ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ ပြုလုပ်လာခဲ့တယ်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် ကျွန်တော်တို့ ကေအိုင်အေခေါင်းဆောင် ဘရန်ဆိုင်းလက်ထက်ကစပြီး ကျွန်တော်တို့ အစည်းအဝေးလုပ်တယ်။ ဘိန်းစိုက်ပျိုးတာတွေ၊ သုံးစွဲတာတွေ၊ ရောင်းဝယ်တာတွေ ရပ်တန့်ဖို့ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ ကေအိုင်အိုအနေနဲ့ ဘိန်းဖြတ်ဆေးရုံတွေ လုပ်တယ်။ ဘိန်းသမားတွေလာပြီး ဘိန်းလာဖြတ်တယ်။ ဖြတ်လိုက်ပြန်သုံးလိုက်နဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ မူးယစ်ဆေးဝါး လုံးဝပပျောက်သွားအောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက သူတို့တွေကို ဒီဟာလုပ်စားပါ၊ ဟိုဟာလုပ်စားပြီး အသက်မွေးပါလို့ အစားထိုးလုပ်ငန်းတွေ မပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ လည်းဖြစ်တယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် လုံးဝပပျောက်ရေးဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ ကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းခဲ့တာ တစ်သုတ်ပြီးတစ်သုတ်ဖွဲ့ခဲ့ကြတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်ကနေစပြီး သီးသန့်ကေအိုင်အို ဗဟိုကော်မတီကနေ အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီး ကျွန်တော်တို့မူးယစ် ဆေးဝါးလုံးဝပပျောက်ရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ ကော်မတီကနေပြီးတော့ ကေအိုင်အိုမှာ အမှုထမ်းနေတဲ့သူတွေထဲမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲနေတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့ သုံးစွဲနေတဲ့ပြည်သူတွေ၊ ဘိန်းချက်တဲ့သူတွေ၊ ရောင်းဝယ် တဲ့သူတွေအားလုံးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီး လိုအပ်တာတွေ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ကော်မတီအနေနဲ့ အခုလိုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန် မှာ မြို့မှာနေထိုင်ပြီး မူးယစ်ဆေး ၀ါးပပျောက်အောင် လုပ်ဆောင် နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွေ နဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ ကိုလည်း အခုလိုဖိတ်ကြားပြီး ရှေ့ဆက်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးရဲ့ ကျေးကျွန်ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေကို ဘယ်လိုကယ်တင်သွားမလဲဆိုတာတွေကို တိုင်ပင်ရအောင်၊ ၀ိုင်းဝန်းတိုက်ဖျက်သွားရ အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကေအိုင်အိုအနေနဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အခုလို စည်းဝေးပွဲကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပိုပြီး အဓိကကျတာကတော့ ဒီစည်းဝေးပွဲကိုလာတဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူငယ်တွေရဲ့ဦးနှောက်များများနဲ့ စဉ်းစားပြီး ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး လုံးဝပပျောက်သွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး- အစည်းအဝေးပွဲရလဒ်ကိုရော ကျေနပ်အားရမှုရှိပါသလား။
ဖြေ- အစည်းအဝေးပွဲမှာ အားလုံးသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အချက်ခြောက်ချက်ရရှိထားတယ်။ အဲဒီအချက်တစ်ခုချင်းဆီကို အခု ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်သွားဖို့အတွက် ကေအိုင်အိုအနေနဲ့ အခက်အခဲတွေ ရှိနေသေးတယ်။ အချက်တစ်ခုချင်းဆီကို ဗဟိုကော်မတီနဲ့ ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးထိုင်မယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်အဖွဲ့က ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင် သွားမလဲဆိုတာတွေကို အသေးစိတ်အစီအစဉ် ချမှတ်ပြီးတော့ ၂၀၁၄ မှာတော့ အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ အခုလာတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးပြန်ခေါ်မယ်။ အားလုံးနဲ့ ပြန်စည်းဝေးပြီး လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်။
မေး- ကေအိုင်အိုရဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မူဝါဒက ဘာပါလဲ။
ဖြေ- မူဝါဒကတော့ အဆင့်ဆင့်ရှိတယ်။ အဓိကကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲ၊ ရောင်းဝယ်၊ စိုက်ပျိုးတာတွေကို ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်သွားမယ် ပြီးတော့ လုံးဝပပျောက်တဲ့အထိ တိုက်ဖျက်သွားမယ်ဆိုတာပါပဲ။ အရင်တုန်းက သင်ခန်းစာအရ သုံးကြိမ်သုံးခါသူတို့ကိုသောက်တဲ့သူတွေကိုရော ဖြတ်ပေးတယ်။ ရောင်းတဲ့သူတွေ စိုက်တဲ့သူတွေကိုရော သုံးကြိမ်သုံးခါဖမ်းဆီးအရေးယူ တယ်။ သုံးခါလွန်ပြီဆိုတာနဲ့တော့ သူ့ရဲ့ ပြစ်ဒဏ်က ပိုပြီးကြီးမားသွားပြီး ထိထိရောက်ရောက်ကိုအရေးယူသွားမှာပါ။ အခု ဗဟိုသီးသန့် မူးယစ်လုံးဝပပျောက်ရေး ကော်မတီရဲ့ မူဝါဒကတော့ (၁) ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လည်း မူးယစ်ဆေးဝါး လုံးဝပပျောက်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမယ်။ ဘာသာရေးအသီးသီးက ဒါကို တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်သွားမယ်။ (၂) အိမ်ထောင်ရဲ့ ဖခင်တွေကလည်း ဒါကို လုပ်ဆောင်သွားမယ်။ (၃) အိမ်ထောင်ရဲ့ မိခင်တွေက လည်း မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက် ရေးမှာ အမျိုးသမီးအလိုက် ပါဝင် လက်တွဲလုပ်ဆောင်မယ်။ (၄) လူ ငယ်တွေကလည်း လူငယ်အလိုက် လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမယ်။ (၅) မျိုးနွယ်စုအသီးသီးက ရိုးရာ လူကြီးတွေလည်း ဒါကို အားတက်သရော ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ မူဝါဒတွေဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။
မေး- မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်တဲ့အခါ မြန်မာတရုတ်အစိုးရ တွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိပါသလား။
ဖြေ- ကျွန်တော်တို့ အခုအချိန် ကတော့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်သွားဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့အခုချိန်က သူတို့နဲ့စစ်ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားတဲ့ ၁၇ နှစ်လုံးလုံး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အကျိုးမရှိဘူး။ ပန်ဝါ၊ ကန်ပိုင်တီဘက်မှာ NDAK ၊ KIA ၊ အစိုးရစစ်တပ်တွေနဲ့ သုံးဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ခဲ့တယ်။ နင်တို့တွေက သွားစရာမလိုဘူးဆိုပြီး အစိုးရစစ်တပ်တွေက ပြန်ပြောလာတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကလည်း သွားလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ သူတို့တွေပဲ နားလည်မှုရှိပြီး ပိုက်ဆံတွေနဲ့ပဲ လုပ်သွားတာ ဘာထိရောက်မှမှုလည်း မရှိဘူးလေ။ သူတို့ရောင်းဝယ်နေတဲ့ နေရာကိုသွားတယ်။ ဟိုကလည်း ပိုက်ဆံထိုးကျွေးလိုက်တယ်။ ပြန်လာတယ်။ ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့ လက်တွေ့မြင်နေရ တဲ့အရာတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့က ဖမ်းလို့လည်းမရဆိုတော့ ရောင်းတဲ့သူရော၊ ၀ယ်တဲ့သူကိုရော ၀ိုင်းရိုက်ပြီး မောင်းထုတ်နေရတယ်။ ဒါကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပါ။ တိုင်း၊ ပြည်နယ်က ရဲတွေက ဖမ်းဆီးတဲ့နေရာမှာ သိပ်မပါဘူး။ ၀ိုင်းမော်မှာပဲကြည့်။ ပြည်သူတွေက မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းတယ်။ သုံးတယ်။ ဒါတွေကို သူတို့ကမင်းတို့ ဘယ်သူ့အမိန့်နဲ့ ရောင်းလဲဆိုပြီး ဖမ်းရော။ သူတို့ ဥပဒေက ချို့ယွင်းမှုတွေရှိနေတယ်။ အခုတော့ပေါင်းလို့မဖြစ်ဘူး။ တရုတ်နဲ့ကတော့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားလို့ရပါတယ်။
မေး- အစိုးရထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာရော ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်သွားဖို့ရှိသလဲ။
ဖြေ- ဒါကတော့ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။
မေး- စီးပွားရေးအချက်အချာကျတဲ့ မြို့တွေမှာ ပိုပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးပေါများနေတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါတွေကိုရော ဘယ်လိုပပျောက်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမလဲ။
ဖြေ- နေရာဒေသကိုလိုက်ပြီး နည်းလမ်းရှာလုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။
မေး- ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကချင်လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ ဘာကြောင့် မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ပေါများနေရတာလဲ။
ဖြေ- ဒါကတော့ လူတိုင်းကိုယ်စီ စဉ်းစားရရင် ပိုကောင်းမှာပါ။ ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ သမိုင်းတွေကိုလည်း လေ့လာခိုင်းစေချင်တယ်။ အရင်တုန်းက ကချင်ပြည်နယ်အနှံ့ ဘိန်းစိုက်ကြတယ်။ ပူတာအို၊ တနိုင်း၊ ဟူးကောင်း စတဲ့နေရာတွေမှာ။
ဒါပေမဲ့ ဘိန်းစားနည်းတယ်။ အခု သုံးစွဲနေရတဲ့ ရာမဆေးတွေ၊ NO4တွေ မရှိဘူး။ အခုက ဒါတွေ အဓိကဖြစ်နေတယ်။ ဒါတွေက တို့အားလုံးအလေးထားစဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေလည်း ဒါကို နှစ်သက်တယ် ထင်ပါတယ်၊ သွားကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေ အများဆုံးဖြစ်နေတယ်။ တခြားလူမျိုးတွေကအနည်းစုပါပဲ။ ဒါကိုအစိုးရလည်းသိတယ်။
ဒါတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကို ဒါနဲ့ တိုက်နေတာလေ။ ကျွန်တော်တို့ စစ်မဖြစ်ခင်တုန်းက လဂျားယန်ဂိတ်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဖမ်းမိတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးထုပ်ကို သူ့ရဲ့ စအိုမှာ ဖွက်ထားတယ်။ ဒါတွေကို မင်းဘယ်သူ့ကိုရောင်းမှာလဲဆိုပြီး မေးတဲ့အခါ ကချင်တွေကို ရောင်းမယ်လို့ အဲဒီ အမျိုးသမီးပြောလာတယ်။ ဒီဆေးတွေက ကချင်ဆိုရင် အကြွေးရောင်းပေးတယ်။ တခြားဆိုရင်တော့ မရဘူး။ ဒါကြောင့် လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားစရာပါ။
မေး- တခြား ဘာများပြောစရာရှိပါသလဲ။
ဖြေ- ကျွန်တော်တို့တွေက ဒါကို လုံးဝပပျောက်အောင် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေလည်း ရောက်နေတဲ့နေရာဒေသမှာ ဒါကို အားလုံးပူးပေါင်းလက်တွဲပြီး တိုက်ဖျက်သွားဖို့ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကို မသုံးစွဲမိအောင် မိမိကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီး သတိနဲ့ အားလုံးနေထိုင်သွားရအောင်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဦးအေးကြူလေး (မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဒုဥက္ကဋ္ဌ)
ဒီနှစ် အကယ်ဒမီ စင်ဆောက်တဲ့ ပုံစံလေးက ထူးခြားပါတယ်။ ဟိုတုန်းကဆို ရိုးရိုးစတိတ်စင်ပဲ။ ရှေ့မှာဆို စတိတ်စင်လို အဝိုင်းလေးပါတယ်။ ပင်မစင်မြင့်ရဲ့ ဘေးနှစ်ဖက်မှာလည်း စင်အသေးလေး နှစ်ခုပါတယ်။ တစ်ဖက် အစီအစဉ် ကြေညာသူတွေ ရပ်မယ်။ တစ်ဖက်မှာတော့ တီးဝိုင်းတင်ထားမယ်။ ပင်မစင်မြင့်ရဲ့ရှေ့က စင်မှာတော့ သီချင်းဆိုပြီး ဖျော်ဖြေမယ့်သူတွေ ဆိုရမယ့် နေရာပေါ့။ အချိန်နည်းနည်းလေးနဲ့ လုပ်ရတာဆိုတော့ တင်ဒါအောင်တဲ့ (Barco) ကုမ္ပဏီကလည်း လုပ်ရတာ အခက်အခဲတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မနှစ်ကနဲ့တော့ လုံးဝမတူဘူး။
ဦးနေလင်းထက် (Barco Company)
စင်မြင့်ဒီဇိုင်းကို အရင်နှစ်တွေထက်ပိုပြီး ခမ်းနားအောင်၊ လှပအောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားထားပါတယ်။ စင်ရဲ့ ဒီဇိုင်းကိုတော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ပြည်တွင်းက ဒီဇိုင်းပညာရှင်ကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ဆွဲခိုင်း ထားပါတယ်။ ပွဲတက်ဖိတ်စာတွေ၊ ပရိသတ်တွေကို ရောင်းချတဲ့ လက်မှတ်တွေ၊ ကြော်ငြာဘုတ်တွေကိုတော့ စင်ကာပူက ဒီဇိုင်း ပညာရှင်တွေဆီမှာ အပ်နှံပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ။ စင်မြင့်မှာ အလှဆင်တဲ့မီးတွေ၊ အသံစနစ်တွေကိုလည်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ထားပါတယ်။
Lucky7မအေးအေးဝင်း
အစ်မတို့ ဇာတ်ကား မော်ကင်းဥဒါန်းက လွန်ခဲ့တဲ့ ကိုးနှစ်လောက်က ရိုက်ထားတာပါ။ ပြသခွင့်ရတာတော့ မနှစ်ကမှပါ။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ပြသခွင့် ပိတ်ခံထားရတာပါ။ ဒီကားကို ရိုက်တုန်းကတော့ အကယ်ဒမီ ရဖို့အတွက်ဆိုပြီး ရိုက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ အရင်ကတော့ အစ်မတို့ ရိုက်ဖြစ်တာက ဟာသကားလေးတွေပဲ ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့။
ဒီကားလေးက ရသစုံကားလေးပေါ့။ လူမျိုးစုတစ်စုရဲ့ ဘဝကို ရိုက်ပြထားတာ။ အဓိကတော့ ဆလုံလူမျိုး အကြောင်းပေါ့။ ဒီကားထဲမှာ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ ရေမြေတောတောင် သဘာဝ အလှတွေအကြောင်း၊ အက်ရှင်ဆန်ဆန်၊ ဒရာမာပုံစံ ရိုက်ပြထားတာပါ။ အဲ့ကားရိုက်တုန်းက နေထိုင်တာကအစ အခက်အခဲရှိတယ်။ သောက်ရေကအစ ချိုးရေလည်း မရှိဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ သယ်သွားရတာပေါ့။ ဟိုမှာလည်း တဲထိုးပြီး ရိုက်ရတာပါ။ ဒီကားကို အကယ်ဒမီ ရမယ်ဆိုရင် အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာမှာပါ။ ရသစုံလည်း ပါတယ်။ တစ်ကားလုံး ခြုံကြည့်ရင်လည်း အရမ်းကောင်းတဲ့ ကားလေးပါ။
မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် အနိမ့်ဆုံး ရွှေ ၇ဝရရန် မျှော်မှန်းထား
ရန်ကုန် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇။ ။ မသန်စွမ်းအားကစား ပြိုင်ပွဲ ခုနစ်ကြိမ်မြောက်ပါရာဂိမ်းတွင် မြန်မာမ သန်စွမ်းအားကစားသမားများ အနိမ့်ဆုံးရွှေ ရဝရရှိရန်မျှော်မှန်းထားကြောင်း အဖွဲ့ချုပ်ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမြင့်က ပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်း အားကစားအဖွဲ့ချုပ်ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမြင့် က ''ပြီးခဲ့တဲ့ပါရာဂိမ်းမှာ ရွှေတံဆိပ် ၁၁ခုရရှိခဲ့ ပါတယ်။ အိမ်ရှင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါ အားကစားနည်း ၁၂မျိုးစလုံးဝင်ပြိုင်ရတယ်။ကျွမ်းကျင်တဲ့အားကစားနည်းက ခြောက်မျိုးပါ။ ရွှေ တံဆိပ် (၇၀- ၁၀၀)ရရှိနိုင်ဖို့ မျှော်မှန်းထားပါ တယ်။ ရွှေရဖို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ အားကစား နည်းတွေက ပြေးခုန်ပစ်၊ ရေကူးနဲ့ မျက်မမြင် စစ်တုရင် စတဲ့အားကစားနည်းတွေပါ''ဟု ၎င်းကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပ မည့် မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲ(ပါရာဂိမ်း)တွင် အားကစားနည်း ၁၂မျိုးကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ယင်း ၁၂မျိုးမှာ မြားပစ်၊ ပြေးခုန်ပစ်၊ ဘိုစီယာ၊ ခုနစ်ယောက်တစ်သင်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၊ ငါး ယောက်တစ်သင်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၊ ဂိုးဘောအား ကစားပြိုင်ပွဲ၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ ရေကူး၊ မျက် မမြင်စစ်တုရင်၊ ဘော်လီဘော၊ ဘတ်စကက် ဘောနှင့် အလေးမပြိုင်ပွဲတို့ဖြစ်သည်။
မြန်မာမသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲကို ဇန်န ဝါရီ ၁၁ရက်မှ ၂၂ရက်အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ဖွင့်ပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၁၄ရက်နှင့် ပိတ်ပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၂ဝရက်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
မလေးရှားရှိ မြန်မာအလုပ်သမားများ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားနှင့် အစိုးရ သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးမည်
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မြန်မာအလုပ်သမားများ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနှင့်အညီ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ ရေရှည်အာမခံချက်နှင့် အခက်အခဲများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးမှ အလုပ်သမား အရာရှိနှင့် သံရုံးတာဝန် ရှိသူများသည် မြန်မာအလုပ်သမား အေဂျင်စီ၊ မလေးအလုပ်သမား အေဂျင်စီ၊ စက်ရုံတာဝန်ရှိသူများ၊ မလေးရှား အစိုးရမှ သက်ဆိုင်ရာ စသည်တို့ ပါဝင်သော အလုပ်ရှင် (အလုပ်သမား အေဂျင်စီပါဝင်)၊ အလုပ်သမား၊ (နှစ်နိုင်ငံ) အစိုးရတို့ သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံပြီး ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံး အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦး၏ ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
လက်ရှိတွင် မလေးရှားရှိ မြန်မာသံရုံးကလည်း မလေးရှား အစိုးရသို့ အဆိုပါဖြစ်စဉ်အား အသိပေး၍ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု အမြန်ဆုံးပေးရန် တောင်းဆိုထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများက လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ပေးထားသဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ အခြေအနေမှာ စိုးရိမ်စရာ မရှိတော့ကြောင်း၊ မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ အခြေအနေမှာ လက်ရှိအချိန်တွင် အေးဆေးတည်ငြိမ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာအလုပ်သမားများထံသို့ မြန်မာအလုပ်သမား အေဂျင်စီမှ တာဝန်ရှိသူအချို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး စက်ရုံတာဝန်ရှိသူများနှင့် မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေး၊ လုံခြုံမှုကို ညှိနှိုင်းလျက်ရှိကြောင်း၊ မလေးရှားရောက် မြန်မာ (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ) ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးက မြန်မာအလုပ်သမား များအတွက် ဆန်များလာရောက် လှူဒါန်းပေးအပ် ထားပြီးဖြစ်၍ အစားအသောက် အခက်အခဲ ပြေလည်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ဆာရာဝပ်ပြည်နယ်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာအလုပ်သမား နှစ်ဦးနှင့် အင်ဒိုနီးရှား အလုပ်သမားတို့ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် ပြဿနာဖြစ်ပွားမှ အင်ဒိုနီးရှား အလုပ်သမားများက ရန်ပြုရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမား ၉၇ ဦးမှာ ဂိုဒေါင်တစ်ခုတွင် ပိတ်မိနေခဲ့သည်။
တောင်သူလယ်သမားများ ဆက်လက် ဆင်းရဲနေကြမည် ဖြစ်ပါက နိုင်ငံလည်း ဆင်းရဲနေမည်ဖြစ်ပြီး လူနည်းစု လူတစ်စုသာ ချမ်းသာနေရုံဖြင့် နိုင်ငံတိုးတက် လာသည်ဟု မဆိုနိုင်ကြောင်း လယ်ဆည်ဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင် ပြောကြား
တောင်သူလယ်သမားများ အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေး ဒုတိယနေ့ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်ကို တွေ့ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မူလအခြေခံစိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူကြသည့် တောင်သူလယ်သမားများ ဆက်လက် ဆင်းရဲနေကြမည် ဖြစ်ပါက နိုင်ငံလည်း ဆင်းရဲနေမည်ဖြစ်ပြီး လူနည်းစု လူတစ်စုသာ ချမ်းသာနေရုံဖြင့် နိုင်ငံတိုးတက် လာသည်ဟု မဆိုနိုင်သည့်နည်းတူ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ အလယ်တွင်လည်း အဖက်ဖက်မှ မျက်နှာငယ်နေ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် တောင်သူလယ်သမားများ အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေး ဒုတိယနေ့ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
''နေ့စဉ်နေ့အမျှ ကြုံတွေ့ကြားမြင် နေကြရသည့် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ကို စွန့်ခွာပြီး၊ မြို့ပြတွင်ရရာ ကျပန်းအလုပ်များဖြင့် ၀မ်းစာအတွက် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်ရှာဖွေ လုပ်ကိုင်နေကြသူများ၊ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ နေ့စဉ်နေ့အမျှ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေကြရသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ အကြားမှာပင် အောက်ကျ နောက်ကျ လုပ်သားများ Migrate Workers အဖြစ် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ၏ ဘ၀သည် တိုင်းပြည်၏ စိတ်မချမ်းမွေ့ဖွယ်ရာ ပုံရိပ်များပင် ဖြစ်ပါသည်'' ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ပြောကြားရာတွင် ''နိုင်ငံ၏ အမျိုးသား အသားတင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး လယ်ယာကဏ္ဍသည် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ပါဝင်လျက်ရှိနေပြီး ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချနေသည့် တင်ပို့ကုန်များမှာလည်း သဘာဝ သယံဇာတများနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသာ ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းကမှ ထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်ကုန်တို့မှာ ပြည်ပဈေးကွက်သို့ တင်ပို့ရောင်းချ နိုင်သည့်အဆင့် အရည်အသွေးအားဖြင့် ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ၀န်ကြီးက ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်က ''၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် သော်လည်းကောင်း၊ အဆိုပါဥပဒေ ပြဌာန်းထားသော ပုဒ်မတစ်ခုချင်းစီတွင် လည်းကောင်း၊ ဦးဆောင်အဖွဲ့အား ပေးအပ်ထားသော တာဝန်များကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ပေးကြခြင်း ဖြင့်သာလျှင် အခြေခံ တောင်သူလယ်သမားများ၏ အကျိုးစီးပွား လက်တွေ့ဘ၀ကို အမှန်တကယ် မြှင့်တင်ဖော်ဆောင် ပေးနိုင်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေး ဥပဒေ၏ အနှစ်အရသာ ရှိမှုနှင့် တောင်သူလယ်သမားများနှင့် နိုင်ငံသား အားလုံးအတွက် အလွန်ပင် အရေးကြီးသော လက်တွေ့အလျင်အမြန် အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်ကြောင်း'' ပြောကြားခဲ့သည်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံဒေသအား နိုဝင်ဘာလ အတွင်းက တွေ့ရစဉ်
ဗီဇာ၊ အလုပ်ပါမစ်၊ ယာယီနိုင်ငံကူး လက်မှတ်များရရှိပြီး နေရပ်သို့ ပြန်လာရသော အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ၏ လူမှောင်ခို ပြဿနာ – Bolay
တတိယနိုင်ငံကို ထူထောင်မည့် လူမျိုးခြားဘင်္ဂါလီများသည် မိမိနေထိုင်ရာမှ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ ကျောက်တော်၊ ပလက်ဝမှ ရန်ကုန်သို့လည်းကောင်း၊ အိန္ဒိယမှ မိုရေး၊ တမူး၊ ကလေး၊ မုံရွာမြို့များသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီး မန္တလေးသို့ ၀င်ရောက်လာရာ လူမှောင်ခိုလုပ်ငန်းများလည်း ဖြစ်ပွားလာပေသည် . . .
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အသွင်ကူးပြောင်း ကာလတွင် အခြေခံ ပြည်သူများက ဆင်းရဲမှုဒဏ်ကို ပိုမိုခံစားလာရပြီး နိုင်ငံတွင်း ဆင်းရဲမှုကြောင့် သူခိုး၊ ဓားပြများက အုပ်စုဖွဲ့ လုယက်မှု ပုံစံသဖွယ် အကြမ်းဖက် လုပ်ငန်း များ ဖြစ်ပွား လာသည်။ ပြည်တွင်း စစ်ဒဏ်ကြောင့် ပြည်သူအချို့လည်း စားဝတ်နေရေး ပြဿနာကို ကြုံတွေ့နေရ သည်။ လယ်ယာမြေသိမ်း ပြဿနာများကြောင့်လည်း ပြည်သူအချို့ ကျူးကျော် နေထိုင်သည့် ဒုက္ခများလည်း ကြုံတွေ့နေရသည်။ လူမျိုးခြား ပြဿနာကြောင့်လည်း ပညာရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာများ ကြုံတွေ့နေရသည်။ ထိုသို့သော ပြဿနာများနှင့်အတူ လူမှောင်ခိုနှင့် လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာများက မြို့ကြီးမက ကျေးလက် တောရွာများသို့ ပျံ့နှံ့ ၀င်ရောက်လာပေသည်။ …
လူလူချင်း ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သော လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာသည် အဆိုးဝါးဆုံးသော လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်သည့် ပြစ်မှုကြီး ဖြစ်လာသည်။ ဥပဒေသစ်တစ်ရပ် အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှု ပြဿနာများစွာ ရှိပြီး တရားဥပဒေ စိုးမိုးခြင်း မရှိလျှင် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ခြင်းအတွက် အဟန့်အတား ဖြစ်စေသည်။ ဥပဒေများ အသက်ဝင် အရေးပါစေရန် ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ ဥပဒေတိုင်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပွင့်လင်း မြင်သာခြင်းနှင့် တိကျမှု မှန်ကန်ခြင်းက လိုအပ်ပေသည်။ ထို့နောက် တိုင်းပြည် ဆင်းရဲခြင်းသည်လည်း နိုင်ငံသားများ ဆင်းရဲ မွဲတေခြင်းနှင့် နည်းပညာများ လေ့လာသင်ယူမှု အားနည်းပြီး မတတ်မြောက်၊ မကျွမ်းကျင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အဖျက်အမှောင့် လုပ်ရပ်များကြောင့်လည်း လူ့အရင်းအမြစ်များလည်း လျော့ပါး လာစေသည်။ ထို့ကြောင့် လူသားအရင်းအမြစ် ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်ကို လေးစား တန်ဖိုးထားကြရန် ဇာတိသွေး၊ ဇာတိမာန် တက်ကြွ ရှင်သန်သော ၀ံဿနုရက္ခိတ တရားကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ကြရန် လိုအပ်ပါသည်။
နိုင်ငံတွင်း နာဂစ်ဘေးကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ် လုပ်ကိုင် နေထိုင်ရာမှ လူကုန်ကူး ခံရခြင်း၊ ပြည်တွင်း ဆူပူအကြမ်း ဖက်မှုကြောင့် လူကုန်ကူးခံရခြင်း၊ စစ်ဘေး၊ စစ်ရှောင်ဒဏ်များကြောင့် ပြည်သူများ ခိုလှုံမှု ငတ်မွတ်နေ၍ လူကုန်ကူးခံရခြင်း၊ အခြေခံလူတန်းစားများ၏ အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာကြောင့် လူကုန်ကူးခံရ ခြင်း၊ ဗဟုသုတ နည်းပါးပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါး သောကြောင့် လူကုန်ကူးခံရခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲလာ၍ သားသမီးများ စိတ်လေလွင့်ကာ လူကုန်ကူးခံရခြင်း၊ အလှအပများ မက်မောပြီး ဖြတ်လမ်းမှ ကြီးပွား ချမ်းသာလိုကြ၍ လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာများ တစ်စတစ်စ ကြီးထွားလာရာ ပြည်တွင်း သာမက ပြည်ပနိုင်ငံနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ များလည်း လူမှောင်ခိုနှင့် လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာကား သမိုင်းစာမျက်နှာပေါ် ၀င်ရောက် ထိုးဖောက် လာပေသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာ၍ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်များပါ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မပါရှိသည်ဖြစ်စေ တရားဝင် သွားရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ တရားမ၀င် သွားရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအား လုပ်ငန်းရှင်နှင့် လူမှောင်ခိုပွဲစားများက နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခေါင်းပုံဖြတ်၊ အမြတ်ထုတ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးများကို ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် ရောင်းချခြင်း၊ အမျိုးသမီးများကို မယားပြုရန် ရောင်းချခြင်း၊ ကလေးသူငယ်များ လိင်မှုကိစ္စများ ကျူးလွန်ခြင်း၊ လိင်အလုပ်ဖြင့် စီးပွားရေးအရ ဖျော်ဖြေစေခြင်း၊ ဇနီးမယားအဖြစ် တရားဝင် လက်ထပ်ပြီး ရောင်းစားခဲ့ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် လစာ ကောင်းရမည် ပြော၍ ရပ်ဝေးတွင် ရောင်းစားခြင်း၊ အိမ်ဖော်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ကာရာအိုကေ၊ အလှပြုပြင်ရေး၊ တေးဂီတ၊ အနှိပ်ခန်းများတွင် အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်သည့် လူကုန်ကူးမှု လုပ်ငန်းများ တွင်ကျယ်လာပေသည်။
နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံသားများ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်ရေးအား မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာများဖြင့် ဖော်ဆောင်နေစဉ် ပြည်တွင်းအလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာနှင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာ အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာများတွင် အသက် အန္တရာယ်များသည့် လုပ်ငန်းခွင်၌ လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ အာဏာရှင် ဆန်ဆန် ဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက် ငွေညှစ်ခြင်း၊ အလုပ်သမားများအား ဖြားယောင်း သွေးဆောင်ခံရပြီး၊ အတင်းအဓမ္မ ခိုင်းစေခံရခြင်း စသည့် အမြတ်ထုတ် ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရခြင်းများ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေပါသည်။ ၎င်းနောက် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် တရားဝင် မြန်မာ အလုပ်သမားများ၏ တရားဝင် နေထိုင်ခွင့် စာရွက် စာတမ်းများကို အလုပ်ရှင်က သိမ်းဆည်းပြီး၊ အလုပ်သမားများ မတော်တဆ ထိခိုက်သေဆုံးခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ခြေလက်အင်္ဂါ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ လုပ်အားခ အပြည့်အ၀ မရရှိခြင်း၊ အသက်အာမခံကြေး နှင့်ပြန်ပို့ငွေများကို အလုပ်ရှင်က ဖြတ်ယူထားခြင်း၊ အိမ်ဖော် အလုပ်လုပ်သူများအား အချိန်ကြာမြင့်စွာ ခိုင်းစေခြင်း၊ အလုပ်သမားများ၏ တရားဝင် အထောက်အထားများကို ဖျောက်ဖျက် ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ရဲခေါ်၍ ဖမ်းခိုင်းခြင်း စသည့် ခေါင်းပုံဖြတ်သော ပြဿနာများ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။
တတိယနိုင်ငံကို ထူထောင်မည့် လူမျိုးခြား ဘင်္ဂါလီများသည် မိမိနေထိုင်ရာမှ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ ကျောက်တော်၊ ပလက်ဝမှ ရန်ကုန်သို့လည်းကောင်း၊ အိန္ဒိယမှ မိုရေး၊ တမူး၊ ကလေး၊ မုံရွာမြို့ များသို့ ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်ပြီး မန္တလေးသို့ ၀င်ရောက်လာရာ လူမှောင်ခို လုပ်ငန်းများလည်း ဖြစ်ပွား လာပေသည်။ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း တိုက်ဖျက်နေသော လူမှောင်ခို၊ လူကုန်ကူးပြဿနာနှင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာအလုပ်မဲ့ ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရာတွင် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်များ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ရန် နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏ သက်တမ်းမှာ ၁၀ နှစ် သတ်မှတ်ချက်ရှိသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံတွင် ၅ နှစ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ၃ နှစ်၊ လာအို နိုင်ငံတွင် ၅ နှစ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၃ နှစ် ဟူ၍ သတ်မှတ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Validation Term ကို ၅ နှစ် သတ်မှတ်ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အစိုးရအချင်းချင်း သဘောတူညီချက်အရ အခြေခံအလုပ်သမား အခွင့် အရေးများ ရရှိရန် လူကုန်ကူးခြင်း၊ လူမှောင်ခိုခြင်းနှင့် တရားမ၀င် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်ခြင်းတို့ကို တားဆီးနိုင်ရန် ယာယီ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် များကို နယ်စပ်မြို့များရှိ တာချီလတ်မြို့၊ မြ၀တီမြို့၊ ကော့သောင်းမြို့နှင့် ထားဝယ် မြို့များတွင် လည်းကောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆိုင်မြို့၊ ဘန်ကောက်မြို့နှင့် ရနောင်းမြို့များတွင် လည်းကောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံပြည်ပ အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု ကြီးကြပ်ရေးရုံးများ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး၊ အောက်ဖော်ပြပါ အဆင့် ၇ ဆင့်ဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ ယာယီနိုင်ငံကူး လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပါသည်။
မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား တစ်ဦးသည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဆေးရုံ သို့မဟုတ် ဆေးခန်းတွင် ဆေးစစ်ခံယူမှု အတွက် ဆေးထောက်ခံချက် တစ်နှစ် သက်တမ်းရယူရမည်။ ဆေးထောက်ခံချက်သည် စက်ရုံပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၏ အိမ်ထောင်စု စာရင်းများနှင့်အတူ ယာယီနိုင်ငံကူး လက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့် ကုမ္ပဏီသို့ အလုပ် အပ်နှံရမည်။ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ၏ ၀န်ဆောင်ခနှုန်းမှာ ဗန်ကောက်မြို့ ကုမ္ပဏီသည် တစ်ဦးလျှင် ဘတ် ၄၅၀၀ နှုန်း ၀န်ဆောင်ခ ပေးရပါသည်။
၀န်ဆောင်မှု ပေးရသော ကုမ္ပဏီသည် အပ်နှံထားရှိသော မြန်မာ အလုပ်သမားများအတွက် ထိုင်း အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ နေပြည်တော်တွင် ပုံစံဖြည့်စွက်ခြင်း အဆင့် ၁ မှ ပြုလုပ် ပြီးသော အထောက်အထား မိတ္တူများတွင် တစ်ဦးလျှင် ဓာတ်ပုံ ၂ပုံဖြင့် ဗန်ကောက်မြို့ရှိ အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်။ တစ်နှစ် သက်တမ်းရှိသော အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင် (ဘတ်ကတ်) အား ထုတ်ယူရရှိနိုင်သည်။
အဆင့် ၃ တွင် ဘတ်ကတ် ရရှိပြီး အလုပ်သမားများ၏ အမည်စာရင်းကို ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးမှ တစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးရုံးသို့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဟုတ်မဟုတ် စိစစ်ပြန်ကြားပေးရန် ပေးပို့ပြီး၊ ထိုမှတစ်ဆင့် မြန်မာလူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာန ၀န်ကြီးရုံးသို့ အမည်စာရင်းများ ပေးပို့ကာ နိုင်ငံသား စိစစ်မှုအတွက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အတည်ပြု စိစစ်ပြီးသော စာရင်းအား နိုင်ငံခြားရေး ရုံးမှ ထိုင်းအလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနသို့ ဆက်လက် အကြောင်းပြန်ကြား ပေးရသည်။
အဆင့် ၄ တွင် ထိုင်းအလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနမှ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီများကို ခေါ်ယူ တွေ့ဆုံကာ ၎င်းတို့၏ ကုမ္ပဏီများမှ တင်ပြထားသော မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ စာရင်းအား စိစစ်လက်ခံကြောင်း အကြောင်းကြား ထုတ်ပေးပါသည်။ အလုပ်သမားစာရင်းနှင့် သံရုံးတို့ပါ ထည့််ပေးပါသည်။
ထိုစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ၊ အချက်အလက် ပြည့်စုံစွာ ရရှိပြီးသော ကုမ္ပဏီများသည် အဆင့် ၅ တွင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များအား ထိုင်းနိုင်ငံ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနသို့ စေလွှတ်ကော နယ်စပ်ဖြတ် ကျော်ခွင့် လျှောက်ထားရမည်။ သို့မှသာ နယ်စပ်ရှိ ယာယီနိုင်ငံကူး လက်မှတ် ထုတ်ပေးသော ရုံးများသို့ လာရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် ၆ တွင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခွင့် ရရှိပြီးပါက ထိုင်းနိုင်ငံ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနတွင် ပြန်လည် တင်ပြ ပေးရမည်။ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနမှ အကွက် ၃ ပါ စာရွက်၏ အပေါ်ဆုံး နေရာတွင် တာဝန်ခံ အရာရှိ လက်မှတ် ရေးထိုးပေးခြင်း၊ တံဆိပ် ရိုက်နှိပ်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်၍ ကိုယ်စားလှယ်များထံသို့ ပြန်ပေးပါသည်။
အဆင့် ၇ တွင် ကိုယ်စားလှယ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်များရှိ မြန်မာ အလုပ်သမားများအား ခေါ်ဆောင်၍ စာရွက်စာတမ်း များနှင့်အတူ နယ်စပ်ရှိ ယာယီနိုင်ငံကူး လက်မှတ် ပြုလုပ်ပေးသော ရုံးသို့ သွားရောက်ရပါသည်။ ထိုရုံးတွင် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီး မြန်မာ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနမှ စမတ်ကတ်ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနက မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာကြောင်း တံဆိပ်ထု၍ ထိုင်းနိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးဌာနသို့ ၀င်ရောက်ကြောင်းကို တံဆိပ်တုံး ထုပေးရပါသည်။ မြန်မာ အလုပ်သမား တစ်ဦးအား အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီများက တရားဝင် သွင်းငွေများ အပြီးအစီး ဘတ်ကတ် ပြုလုပ်ပါက ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေမှာ ထိုင်း ၃၅၀၀ ဘတ်၊ ယာယီ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်နှင့် ၂ နှစ် ဗီဇာအတွက် ကောက်ခံငွေမှာ ထိုင်း ၆၀၀၀ ဘတ်၊ ၂ နှစ်အတွက် အလုပ်ပါမစ် ကောက်ခံငွေမှာ ထိုင်း ၄၀၀၀ ဘတ်၊ စုစုပေါင်း ထိုင်း ၁၃၅၀၀ ဘတ် ကုန်ကျပါသည်။ မြန်မာအလုပ်သမား တစ်ဦး ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားဝင်အလုပ် လုပ်ခွင့်ရရန် ယာယီနိုင်ငံ ကူးလက်မှတ် ရယူရန် ကုန်ကျငွေမှာ ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁၃၅၀၀ မှ ၁၅၀၀၀ ခန့် မြန်မာနိုင်ငံ ငွေကြေးအရ ၅၀၀၀၀၀ိ/- ကျပ်ခန့် ကုန်ကျပါသည်။
ထိုသို့ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာ အလုပ်သမားများကို ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် သက်သေခံကတ်ပြား၊ နိုင်ငံသား စိစစ်မှု လုပ်ငန်းတွင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား ထုတ်ပေးခြင်းသည် အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးရေး၊ အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာ မဖြစ်ပွားရေးနှင့် မြှင့်တင်ရေးအတွက် နိုင်ငံအချင်းချင်း လူမှောင်ခိုနှင့် လူကုန်ကူးမှုများ မဖြစ်ပွားစေရန် လမ်းညွှန် ချမှတ်ထားသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီများမှ တရားဝင် အလုပ်သများကို စည်းရုံး ပို့ဆောင်ခြင်းအား သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် ခဲ့သော်လည်း အချို့သော အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီများက လူမှောင်ခိုနှင့် လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာများ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း နေရပါသည်။
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားများသည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် ဗီဇာများ၊ အလုပ်ပါမစ်များ၊ ယာယီနိုင်ငံကူး လက်မှတ်များ လျှောက်ထား ရရှိခဲ့သော်လည်း အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီများ၏ ပွဲစားများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စည်းရုံး ပို့ဆောင်ဖြားယောင်း၊ သွေးဆောင်မှုများကြောင့် ပြည်ပနိုင်ငံတွင် မြန်မာ အလုပ်သမားများအား ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်ခြင်း၊ ငွေကြေး သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများ ရယူပြီး လူမှောင်ခိုနှင့် လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာများ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ စုံစမ်း ထောက်လှမ်းရရှိသော သတင်း မှတ်တမ်းများအရ အသိပညာပေး ရေးသား ဖော်ပြ လိုက်ပါသည်။